May 2015 ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
Author: lubo601 | 10:00 PM | No မှတ်ချက် |
August 18, 2012 at 7:32pm
အချစ်မှာ ဘယ်လိုသောအကြောင်းပြချက်တွေများရှိမှ ချစ်လို့ရမှာတဲ့လဲ
နဂိုမျက်နှာထားကိုက ပြုံးရွှင်နေတဲ့ ယာဉ်ထိန်းရဲတစ်ယောက် (၂၆x၈၀) လမ်းထောင့်က မီးပွိုင့်မှာ အလုပ်လုပ်နေတယ်။ မန္တလေးမြို့ရဲ့ မေလ၊ နေ့ခင်း (၁၂း၃၀) အချိန် ရာသီဥတုက ကျဲကျဲတောက်ပူလောင်နေတယ်။ အမိုးအကာအောက်မှာ နေထိုင်ရတဲ့သူတွေအတွက် သိပ်မသိသာလှပေမယ့် မိုးကောင်းကင် ဟင်းလင်းပြင်အောက်၊ လမ်းမတစ်ခုထက်ရောက်နေတဲ့ ကျွန်တော့်အဖို့တော့ သူ့ကိုစောင့်ကြည့်နေရတဲ့ (၁၅) မိနစ်လောက် အချိန်ကလေးမှာတောင် သက်သောင့်သက်သာမရှိခဲ့ဘူး။
Soe Min May 28, 2015 at 5:19pm
“နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆက် မဟာဝင်တည် အတိတ်အဖြစ်အပျက် ကမ္ဘာတွင်သည်။ ဘယ်ရာဇာပင် မစံမြန်းသည့် မန်းရွှေမြို့ပြည်။” တဲ့။
မန်းလေးသူ မန်းလေးသားတွေဟာ အင်မတန်မှ မဟာဆန် နန်းဆန်တဲ့သူ၊ ယဉ်ကျေးတဲ့သူတွေလို့ ကိုယ်တွေ တစ်သက်လုံး ယူဆထားခဲ့ကြပါတယ်။ အောင်မြေမြမန်း နန်းလေတည်စိုက်ရာမှာ ရာဇာမင်းစိုးတို့နဲ့ တမြေတည်းတရေတည်း နေခွင့်ရခဲ့သူတွေ မဟုတ်လား။ ရပ်ကြီးသူ ရပ်ကြီးသားများလို့ ဆိုလို့ရတာပေါ့။ (အခုလည်း ပြည်ကြီးသူ ပြည်ကြီးသားများလို့ ပြောရင် မမှားသေးပါဘူးနော့။) မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ်လည်း အင်မတန်ကို ပြင်းပြတဲ့သူတွေပါ။ ယောင်ပေစူးကလေးနဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ စာသင်နေတဲ့ ဆယ်နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်ကလေးတောင်မှ ဘီရိုပေါ် မောင်နှံတင်၍ ဆောင်ပျံပလ္လင် ဂေါဝိန်စခန်းကို မြန်းကြွရှာလေပြီ ဆို ပါတော်မူတာမြင်မိရင် စီးကြမျက်ရည် ရွှေနန်းတော်တိုင်ကို မှီကာငိုမိပါသတဲ့။ သူကမှ ကိုယ်တိုင်သိမီလိုက်ရလို့ တ ကာ မုနိ ကြွေလုသည်းဆိုင် ဖြစ်နေရှာတာ မဟုတ်ပါဘူး။
တစ်နေ့က ဆရာများသမဂ္ဂက ဆရာတစ်ဦးနဲ့ ကားအတူစီးပြီး မြောက်ဒဂုံကိုပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ဆရာသမဂ္ဂကို ကိုယ်တိုင်ပါဝင်လှုပ်ရှားခြင်း မပြုနိုင်ပေမယ့် တကယ့်ကို စိတ်ဓာတ်နဲ့ အားကြိုးမာန်တက် လုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ ဆရာတွေကို လေးစားဂုဏ်ပြုလျက်ပါ။
ပုသိမ်နည်းပညာတက္ကသိုလ်က သရုပ်ပြဆရာ ဦးဝေယံအောင်ကို အလုပ်ကြမ်းနဲ့ ထောင်ဒဏ် ၃ လ ချမှတ်လိုက် တဲ့အကြောင်းတွေ ပြောဖြစ်တယ်။ ကျောင်းသားတွေကို သပိတ်စစ်ကြောင်းမှာ လိုက်လံစောင့်ရှောက်ပေးတဲ့ ဆရာတစ်ယောက်ကို အလုပ်နဲ့ ထောင်ဒဏ် ၃ လ ချမှတ်လိုက်တာကတော့ ဆရာလောကတစ်ခုလုံးကို စိန်ခေါ် လိုက်သလိုပဲဗျ။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် မလုပ်နဲ့၊ မရှုပ်နဲ့၊ ဟောသည်လို လုပ်လို့လည်းရတယ်ဆိုပြီး ပညာပေးလိုက် တာလို့ ယူဆနိုင်သပေါ့ဗျာ။ ဆရာတစ်ယောက်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို လူသတ်တာလည်းမဟုတ်၊ ဓားပြတိုက်တာ လည်းမဟုတ် ဆန္ဒပြမှုနဲ့ ဆက်နွှယ်ပြီး ထောင်ဒဏ်ချလိုက် တာဟာ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ချိုးဖဲ့စော်ကားလိုက်တာလို့ လည်း ယူဆနိုင်ပါတယ်။
နည်း(၅) မိမိနှိုင်ယှဉ်မယ့်အရာတွေကို ဉာဏ်ရှိရှိ ရွေးချယ်ပါ။
‪#‎ကျနော်တို့တွေ‬ စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့ ကျေနပ်တယ်၊ မကျေနပ်
ဘူးဆိုတဲ့ ခံစားချက်တွေဟာ ကိုယ်က ကိုယ့်ကိုယ်ကို အခြားသူတွေနဲ့ နှိုင်း
ယှဉ်လိုက်ရာက စတာပါပဲ။ ကိုယ့်ထက်ပိုပြီး ပြည့်စုံသူတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်မိလိုက်
တဲ့အခါ စိတ်မကောင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကိုယ်လောက် မှ မပြည့်စုံသူတွေ
နဲ့ နှိုင်းယှဉ်လိုက်တဲ့ အခါကျပြန်တော့လည်း ကျေနပ်တဲ့စိတ်က ဖြစ်သွားပြန်
ပါရော။ ဒါပေမယ့် ဘယ်နည်းနဲ့ပဲ ကြည့်ကြည့် ရှိနေတဲ့ အမှန်တရားကတော့
ဒီအတိုင်းပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ဘ၀တွေကို ပြန်ကြည့်ပြီး ပေါ်ပေါက်လာတတ်
တဲ့ စိတ်ခံစားမှုဟာ ကိုယ်က ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်သူတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်သလဲ
ဆိုတာအပေါ် မူတည်ပြီး အကြီးအကျယ် ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်တတ်ပါ
တယ်။ ကိုယ်က ကိုယ့်ဘ၀ကို အခြားသူတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်တော့မယ်
ဆိုရင် အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိ နှိုင်းယှဉ်တတ်ရပါမယ်။
ဒီစာလေးကို Tag လုပ်မိတဲ့သူတွေရော
မလုပ်မိတဲ့သူတွေရော! ဒီ Post ကိုတွေ့ရင် ပြီးဆုံးအောင်ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်!
Tag လုပ်ရတဲ့အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က ဒီစာကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖတ်မိကြစေချင်လို့ပါ!
ဒီစာကို ဖတ်ပြီး ရှယ်တဲ့သူလဲ ရှိချင်ရှိမှာပါ။မင်းက အိမ်ထောင်သည်ဘဝကို ဘယ်လောက်များ နားလည်လို့လဲလို့ မေးစရာတွေ ရှိချင်ရှိနေကြမှာပါ။
Entrepreneurs Sme Myanmar
Author: lubo601 | 12:45 PM | No မှတ်ချက် |
မင်းတို့ အမေရိကန် ပထမဆုံး သမ္မတ သိလား၊ ဘယ်သူတဲ့တုန်း? (လင်ကွန်းပါဘုရား)၊ တောက်တီး တောက်တဲ့နဲ့ (၁၆)ယောက်မြောက်မှ လင်ကွန်းပဲ၊
ဒါ ကျောင်းဆရာ တဲ့ ခွေးမသား၊ ၀ါရှင်တန်ပေါ့ကွ၊
အမေရိကန်မှာ ပထမဆုံး သမ္မတဖြစ်တာ ၀ါရှင်တန်ကွ၊ ဟုတ်လား။
အဲဒီ ၀ါရှင်တန် ငယ်စဉ်က သူတို့ အိမ်နောက်ဖေးမှာ ခြံရှိတယ်ပေါ့ကွာ၊
Author: lubo601 | 12:44 PM | No မှတ်ချက် |
ဈင်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ကရာတေးသင်တန်းတစ်ခု၏ ခါးပတ်နက် သင်တန်းဆင်းပွဲတွင်ဖြစ်သည်။ ထင်ရှား သည့် ဆရာကြီး တစ်ဦး၏ သင်တန်းဖြစ်ပြီး ရနိုင်ခဲ့သည့် ခါးပတ်နက်သင်တန်းဖြစ်သောကြောင့်လည်း အလွန် တန်ဖိုးထားလေ့ရှိကြသည်။ ဆရာကြီးထံပါးတွင်နှစ်ပေါင်းများစွာ လေ့ကျင့် သင်ကြားခဲ့သော တပည့်တစ်ဦးအား ခါးပတ်နက် အပ်နှံပွဲနေ့ဖြစ်သည်။
"တပည့် သင့်ကို ငါ ခါးပတ်နက် မအပ်နှံမီ စမ်းသပ်စရာတစ်ခုရှိသည်။ ထိုစမ်းသပ်မှုကို အောင်မှသာ သင် ခါးပတ်နက်ကို လက်ခံရရှိမည်"
"စမ်းသပ်ပါဆရာ။ ခံယူရန် အသင့်ပါ"
ဆရာသည် မည်သို့ စမ်းသပ်မည်မှန်း မသိသောကြောင့် တပည့်ဖြစ်သူက အသင့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်လိုက်သည်။ ဆရာက
"ငါ သင့်ကို မေးခွန်းလေးတစ်ခုပဲ မေးမှာပါ။ ခါးပတ်နက်ဆိုတာဘာလဲ။ အဲဒါဖြေစမ်းပါ"
(ဓာတ်ပုံနှင့်သတင်း - အောင်ရဲကို၊ အောင်မျိုးသန့်)
ရေကူးအသံလွှင့်စက်ရုံ တင်ဒါကိစ္စကို မေ ၂၇ရက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာ ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးပိုက်ထွေးက လာရှင်းတယ်။
ဦးပိုက်ထွေး ရှင်းလင်းတာကို ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးလည်းဖြစ်၊ သမ္မတ ပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသူလည်းဖြစ်တဲ့ ဦးရဲထွဋ်က သူ့ရဲ့ Facebook မှာ ဖော်ပြတယ်။
The Adventurers - အထောက်တော်လှအောင် 3.pdf
The Adventurers - အထောက်တော်လှအောင် 4.pdf
The Adventurers - အထောက်တော်လှအောင် ၁.pdf
The Adventurers - အထောက်တော်လှအောင် ၂.pdf
Author: lubo601 | 12:42 PM | No မှတ်ချက် |
အာမခံနဲ့ရောင်းတဲ့ ဆံပင်ပေါက်ဆေး ဆိုင်ထဲကို ထိပ်ပြောင်းကြီးတစ်ယောက် ဒေါကြီးမောကြီးနဲ့ ဝင်လာပြီး ပြောတယ်... ...
"မင်းတို့ပြောတော့ ဆေးနှစ်ပုလင်းကုန်ရင် ဆံပင်ပြန်ပေါက်မယ်ဆို၊ ဒီမယ်ကြည့်စမ်း င့ါခေါင်းကို"
"စိတ်လျှော့ပါ နောင်ကြီး၊ ဆေးဖိုး ၁ဝ ဆပြန်လျော်ပါ့မယ်"
Author: lubo601 | 8:19 PM | No မှတ်ချက် |
(၁) အင်းဝရွှေနန်းရောက် ဗြိတိသျှ သံအဖွဲ့မှတ်တမ်း (၁၈၅၅)(တက္ကသိုလ်နေ၀င်း)
(၂)အလောင်းမင်းတရားကြီး၏ကုန်းဘောင်ရွှေပြည် (ဒေါက်တာ တိုးလှ)
(၄)အောင်ဆန်းသူရိယ ဗိုလ်တိုက်ချွန်း (တက္ကသိုလ်စိန်တင်)
မင်းကြီး။ ။ ဟဲ့..ပေါ်ဦး နင်ကိုးကွယ်နေတာ ဘာကြီးလဲ
ပေါ်ဦး ။ ။ တောင်ပို့ကြီးပါဘုရား
မင်းကြီး။ ။ ဟဲ့....သူ့ချည်းသာလော
ပေါ်ဦး။ ။ ဖွတ်ပါထွက်လာပါတယ်ဘုရား
၆၇ နှစ်အဘွားရဲ့ လေးစားစရာစိတ်ဓာတ်နဲ့ ယနေ့ခေတ် ကျနော်တို့လူငယ်တွေ အတုယူစရာ
မွန်ပြည်နယ်က အသက် ၆၇ နှစ်အရွယ်အဖွါး တစ်ဦးမှ
ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေး လိမ္မာသင်တန်းကို ကလေးများနှင့်အတူ
သင်တန်းအတူတက်ပြီး စာမေးပွဲဖြေနေတဲ့ ပုံရိပ်အချို့ကို
အံ့သြစွာတွေ့မြင်နေရပါတယ်။ မိမိရဲ့မာနတရားကို နှိမ့်ချပြီး
ကလေးများနဲ့အတူ ဘာသာရေးစာပေများကို လေ့လာသင်ကြား
တခါက တရုတ်ကြီးတစ်ယောက်ပြောပြတဲ့အကြောင်းလေးပါ . . ။
သူက ဇီယိုထိုးပြီး ဇီးထုပ် ထုပ်ရောင်းတာပါ။
ဒါလဲ အထင်မသေးပါနဲ့ သူ့ဇီးထုပ်တွေကို ဖြန့်ဖို့ အဲဒီအချိန်က ဒိုင်နာလို ကားမျိုး နှစ်စီးလောက်ရှိပါတယ်။ အလုပ်သမားက ၁၀၀ လောက်ကို ရှိပါတယ်။
အမှန်ဆိုလျှင် ကိုယ့်ဘဝထဲကို ကိုယ့်အတွေးတွေထဲကို သူမ ဝင်ရောက်လာတာ သိပ်မကြာလှသေး။ အချိန်ကာလတွေကို သေသေချာချာ လက်ရေချိုး ရေတွက်ကြည့်မိတော့ ဒီနှစ် ကိုယ့်မွေးနေ့ ပတ်ဝန်းကျင်က စပြီး သူမနှင့် ရင်းနှီးခင်မင်ခဲ့ရတာ ဖြစ်သည်။ ကိုယ်ပိုင် ဘဝတခုကို ကိုယ်တယောက်တည်း တည်ဆောက်နေစဉ် မမျှော်လင့်သော အချိန်တခုတွင် သူမနှင့် မျှော်လင့်မထားသော ဆုံဆည်းခြင်း မျိုးဖြင့် တွေ့ကြုံ ဆုံဆည်းခဲ့ရသည်။
တစ်ခါက နာမည်ကြီး တက္ကသိုလ်မှ ဆရာတစ်ဦးသည် ချောင်ကျသော ရွာတစ်ရွာသို့သွားရောက် လည်ပတ်ခဲ့သည်။ ရွာသို့ရောက်သော် လှေတစီးငှားပြီး မြစ်တစ်လျှောက် လည်ပတ်ခဲ့သည်။
လှေစတင်ထွက်သောအခါ ဆရာက လှေသမားအား......
မြန်မာဘာသာဖြင့် ရေးသားပြုစုထားသော စာအုပ် ၁၈ အုပ် (ဆောက်လုပ်ရေး အင်ဂျင်နီယာများအတွက်)
Myanmar Civil Engineering Knowledge Share Center
Essential of Concrete Inspection and Quality Control by U Kyi Lwin
Civil နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမေးအဖြေများ ၁-၁၂ by Ko Bobo Kyaw
Reinforced Concrete Vol.1by BTech Tin Ko Ko
ETABS အခြေခံများကို လေ့လာခြင်း by MEF
Learning of ETABS Software (Myanmar Version) by BTech Tin Ko Ko
မကြာသေးခင်က ဖေ့ဘုတ် လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာထက်မှာ ခန္တာကိုယ်အချိုးအစား ခပ်လန်းလန်း နာမည်ကလည်း ခပ်မိုက်မိုက် နဲ့ စာရေးဆရာ ကဗျာဆရာမတဦး တဟုန်ထိုး လူသိများလာတာ အားလုံးအသိပါပဲ။ သူကတော့ ရွှေရေးထင်ထင် ဆိုသူပါ။ ခပ်လန်းလန်း ဓာတ်ပုံတွေကြောင့် သူ့ရဲ့ ဖေ့ဘုတ်မှာတောင် လာအပ်သူတွေ follow လုပ်သူတွေ နေ့ချင်းညချင်း များပြားလာတယ်လို့ သူ့ကိုယ်ပိုင် ဖေ့ဘုတ်မှာရေးသားထားတာကိုတောင် တွေ့ရပါသေးတယ်။
Pyae Sone Aung‎ရောဂါရှာဖွေရေးနှင့်ကုသခြင်း။TEST AND TREATMENT
ဒူးနာခြင်းဖြစ်ပြီးမကြာခင်မှာဒူးကျီးပေါင်းဆိုတာ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့် ဒူးနာချိန်ပျောက်ကင်း သည်အထိကုသမှု မရနိုင်သူများ၊ တလွဲကုသမှု ခံနေရသူများ ဂရုစိုက်မှုနဲပါးသူတွေ အနေနဲ့ ကျီးပေါင်း အဆင့်ကိုမလွဲမသွေရောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျီးပေါင်းဖြစ်ပေါ်မှုကလဲအဆစ်တို့ရဲ့ပျက်စီးမှုပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်။လိမ်ညာဟန်ဆောင်မရတဲ့ဝေဒနာပါ။ အဆစ်တို့ရဲ့ပျက်စီးမှုက များခဲ့ရင် ကျီးပေါင်းအဆိုင်အခဲဖြစ်ဘို့က မြန်ပြီးများတတ်ပါတယ်။
Author: lubo601 | 8:43 PM | No မှတ်ချက် |
ပစ္စည်း တစ်ခုကို ထုတ်လုပ်တဲ့ နိုင်ငံ သိနိုင်ဖို့ ဘားကုဒ်ကို ကြည့်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။ တံဆိပ်ကို တုလို့ လွယ်ပေမယ့် တံဆိပ်က ဘားကုဒ်ကို တုဖို့ ခက်ပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်နိုင်ငံအတွက် ဘားကုဒ်က ဘာလဲ ဆိုတာ သိရင် ဘားကုဒ်ကို ကြည့်လို့ ဒီပစ္စည်းဟာ ဘယ်နိုင်ငံထွက် ပစ္စည်းဆိုတာ အလွယ်သိနိုင်ပါတယ်။
ဒါလေးဆိုရင် ရှေ့ဆုံးသုံးလုံးကို ကြည့်ပြီး ထိုင်ဝမ် နိုင်ငံလုပ်ဆိုတာ သိနိုင်ပါပြီ။
Author: lubo601 | 7:10 PM | No မှတ်ချက် |
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပြန်ပြီး ကြိုက်မိတဲ့ အကျင့်စရိုက် တွေထဲမှာ တစ်ခုကတော့ မနက်အစောကြီး အိပ်ရာက ထတတ် တာပဲသမီးရဲ့။ ဟုတ်တယ်။ ဖေဖေ ဟိုး... ငယ်ငယ်ကလေး တည်းကစလို့ အခုအထိ မပျောက်မပျက် ကျင့်မြဲကျင့်နေမိခဲ့တာ မနက်စောစောမှာ အိပ်ရာက ထတာပါပဲ။
ငှက်ကလေးတွေက ကျည်ကျည်ကျာကျာနဲ့ နံနက်ခင်း စကားကို ဆိုကြချိန်။ သစ်ရွက်ကလေးတွေက ညလုံးပေါက်သောက် ထားတဲ့ ရေငွေ့ကလေးတွေနဲ့ စွတ်စွတ်စိုစို ရှိကြချိန်။ လမ်းတွေ ပေါ်မှာက လူသူလေးပါးနဲ့ ယာဉ်အသွားအလာတို့ ရှင်းလင်း ချိန်။
Author: lubo601 | 4:22 PM | No မှတ်ချက် |
"တက္ကသိုလ်ဆိုတာ အရိုင်းအစိုင်းတွေကို ပညာသင်ကြားရာနေရာကြီးတစ်ခုလိုဖြစ်လာပြီ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ လူငယ်တွေကို လူ့ဘောင်ရဲ့ တန်ဖိုးထားစရာတွေကိုမသင်ဘဲ၊ ပညာတွေကိုသာ သင်ခိုင်း ရှာခိုင်း နေတာကြောင့်ပဲ" လို့ ဂျွန် ဟော့ကင်းတက္ကသိုလ်က ပါမောက္ခချုပ် စတီဗင် မူးလားဆိုသူ ပြောသွားတဲ့စကားကို ဆင်ခြင်ဖို့ကောင်းတယ်။
တကယ့်ပညာစစ်စစ်ဆိုတာ ဦးနှောက်ကိုရော နှလုံးသားကိုပါ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရတာပါ။ ပညာမတတ်တဲ့ သူခိုးတစ်ယောက်ဟာ ကုန်တင်ကားကြီးတစ်စီးကို ခိုးကောင်းခိုးနိုင်မယ်၊ ပညာတတ်သူခိုးဟာ မီးရထားလမ်း တစ်လမ်းလုံးကို ခိုးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စကားရှိပါတယ်။ ပညာရှာရာမှာ ပြိုင်သင့်တာက ကြားမြင်သုတ ဘယ်လောက် ရှိသလဲ၊ ဘယ်လောက်ယဉ်ကျေးလိမ္မာသလဲဆိုတာတွေပါ။ ဘယ်နှစ်တန်းလဲ၊ ဘာဘွဲ့လဲဆိုတဲ့ အဆင့်တွေ မဟုတ်ပါဘူး။ အသိဆိုတာ ပကတိအရှိတရားတွေနဲ့ တည်ဆောက်သွားရတာ။ ပညာဆိုတာ အသိနဲ့ အရှိကို ပေါင်းစပ်ရတာ။ ဘွဲ့ရတိုင်း ပညာတတ်မဟုတ်ဘူး။
Author: lubo601 | 4:17 PM | No မှတ်ချက် |
လူတို့သည် ရောဂါများခံစားရသောအခါ ဆေးဝါးများကုသရခြင်း ရေမချိုးရခြင်းစသည်ဖြင့် ရက်လနှစ်ကြာမြင့်အောင် ဝေဒနာကိုခံစားပြီး သေဆုံးသွားရလေသည် ထိုလူသေကောင်၌ မကောင်းသောအနံ့များနံနေသောကြောင့် အသုဘရှုသူ ရဟန်းရှင်လူများ အနံ့သက်သာစေ ရန် ရေချိုးပေးရခြင်း အမွှေးနံ့သာများဖြန်းပေးရခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။
*** သံဓာတ်ချို့ တဲ့ခြင်းကိုဖော်ပြတဲ့ လက္ခဏာ (၉) ရပ် ***
ပျမ်းမျှ အမျိုးသမီး ၁၀-ဦးမှာ ၆-ဦးခန့် က သံဓာတ်ချို့ တဲ့လေ့ရှိကြပြီး၊ နေ့စဉ် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုများတဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ သံ ဓာတ်ပိုမိုလိုအပ်နေတယ်လို့ အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ the Centers for Disease Control and Prevention မှကျွမ်းကျင်သူများက ဆိုပါတယ်။ သံဓာတ်ချို့ တဲ့ခြင်း ရှိ-မရှိ မိမိကျန်းမာရေးအခြေအနေ ကို အောက်ပါ လက္ခဏာ(၉)ရပ်တို့ ဖြင့် စမ်းစစ်နိုင်ပါတယ်။
Author: lubo601 | 4:12 PM | No မှတ်ချက် |
ဘွဲ့လက်မှတ်အတုတွေ ရောင်းချမှု ပါကစ္စတန် ဖမ်းဆီး
FIFA တာဝန်ရှိသူ ၁၄ ဦး အဂတိလိုက်စားမှုနဲ့ တရားစွဲခံရ
ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သူ ခွဲတမ်းအစီအစဉ် အီးယူ ကြေညာမယ်
Luxury Brand Model Awards 2015 ဆု မြန်မာမော်ဒယ် ဇွန်သံစဉ် ရရှိ
ဖီဖာထိပ်တန်း တာဝန်ရှိသူများကို အကျင့်ပျက်ခြစားမှုဖြင့် ဖမ်းဆီး
ခဲသတ္တုပါဝင်မှုများသည့် မောချီးတောင်ပေါ်ရေ ကျန်းမာရေး အန္တရာယ်ရှိ
စစ်ဘေးဒဏ်သင့်ရွာသားများ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကဒ်မရှိ
အမေရိကန်တွင် မိုးသည်းထန် ရေကြီးမှုကြောင့် လူ ၉ ဦး သေဆုံး
မိုဘိုင်းဖုန်းသုံးသူများထံမှ ကောက်မည့်အခွန် ၅ ရာခိုင်နှုန်း ၁ နှစ် ဆိုင်းငံ့
နယ်စပ် ဒုက္ခသည်များ ပြန်လည် အခြေချရေး ဆွေးနွေး
တစ်နှစ်အတွင်း နျူကလီးယားဗုံး တစ်လုံး ပိုင်ဆိုင်နိုင်မည်ဟု ISIS အဖွဲ့က ပြောကြား
ပြဿနာတွေရှိပေမဲ့ နိုဝင်ဘာ မှာ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမည်
လယ်သမားအရေး ကူညီပေးသူ ဒေါ်မြင့်မြင့်အေးအပါအဝင် ၉ ဦး ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရ
Author: lubo601 | 10:49 AM | No မှတ်ချက် |
" အား ငယ် လာ ပြီ "
စိတ်ရောဂါဆရာဝန်က မိမိထံရောက်လာသော လူလတ်ပိုင်း ယောင်္ကျားကို မေးသည် ။
" အလိုလိုနေရင်း အားငယ်တဲ့ စိတ် ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး ပေါ်လာတာလဲ.."
" ကျနော့် ဇနီးဟောင်းနဲ့အခု လက်ရှိဇနီး မမျှော်လင့်ဘဲ တွေ့ သွားကြတယ်..ပထမတော့
သူတို့ နှစ်ယောက် ရန်ဖြစ်ကြတယ်..၊
သီတဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ Dagon City project အပေါ်အမြင်(ရွှေတိဂုံဘုရားအနီးက ဘီလူးမြို့တော်) ``ရွှေတိဂုံဘုရားအနီးက ဘီလူးမြို့တော်´´
Author: lubo601 | 10:45 AM | No မှတ်ချက် |
Kyaw Soe Htut
``ရွှေတိဂုံဘုရားနားမှာ မြို့တော်ကြီး ဖော်ဆောင်တော့မှာ´´။
ဤနှိုးဆော်ချက်သည် မိမိအတွက် တုန်လှုပ်ချောက်ခြားဖွယ်အလွန်ကောင်းသည့် ``သေမင်းတမန်နှိုးဆော်ချက်´´ ဖြစ်၏။ ရွှေတိဂုံဆိုသည်မှာ မြန်မာတို့၏ အသက်၊ မြန်မာတို့၏ ၀ိညာဉ်၊ မြန်မာတို့၏ နှလုံးသည်းပွတ်ပင် မဟုတ်ပါလော။
Friday, 18 February 2011 16:30
Customer is God တဲ့။ အခု ကျွန်တော် မြန်မာပြည်ရဲ့ Cyber Cafe တစ်ခုထဲမှာ အင်တာနက် သုံးနေတယ်။ Google က အလကား ပေးထားတဲ့ service တစ်ခုကို သုံးနေတယ်။ ဒါဆို အခု ကျွန်တော် Cyber Café လေးရဲ့ God။Google ရဲ့ God ။ အံမယ်God မှ နှစ်ထပ်ကွမ်း God တောင် ဖြစ်လို့ပါလား။ တယ်ဟုတ်တဲ့ ငါပါလား။
ကချင်ပြည်နယ် မိုင်ဂျာယန်ခရိုင် မိုင်ဂျာယန်မြို့မှာ တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ ဖက်ဒရယ်ဥပဒေ အကယ်ဒမီက တိုင်းရင်းသားလူငယ်တွေကို သင်တန်းသားသစ်တွေ ခေါ်ယူ နေပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားလူငယ်တွေဟာ အနာဂတ်မှာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ အခြားဥပဒေများ ရေးဆွဲတဲ့ဖြစ်စဉ်ထဲမှာ လူထုရဲ့ကိုယ်စား၊ တိုင်းရင်းသားတွေ ကိုယ်စား
အနေနဲ့ တိုက်ရိုက် ပါဝင်ပတ်သက်နိုင်တဲ့အရည်အချင်းရှိအောင် ပြုစုပျိုးထောင်နေတာ ဖြစ်တယ်လို့ ဖက်ဒရယ်ဥပဒေ အကယ်ဒမီရဲ့ ကျောင်းအုပ်ကြီး လူ့အခွင့်အရေးရှေ့နေ ဦးအောင်ထူးက ပြောပါတယ်။
ကျောက်ခေတ်လူသားများနေထိုင်ခဲ့သည်ဟု ယူဆရသော ကျောက်ဂူတစ်ဂူ သာစည်နှင့် ဝမ်းတွင်းမြို့အကြားတွေ့ရှိ
ရန်ကုန်၊ မေ ၂၄-ကျောက်ခေတ်လူ သားများ နေထိုင်ခဲ့သောကျောက်ဂူ ဟုယူဆရသည့် ကျောက်ဂူတစ်ဂူ သာစည်နှင့်ဝမ်းတွင်းမြို့အကြား၌ တွေ့ရှိထားကြောင်း မန္တလေးရှေး ဟောင်းသုတေသနပညာရှင် များထံ မှ သိရသည်။
ကန်သမ္မတဟောင်း ဘုရှ်၏ အားပေးမှုအပေါ် ဖြိုးဖြိုးအောင် ပြောကြားချက် (ရုပ်သံ)
ဗကသ ကျောင်းသူ မဖြိုးဖြိူးအောင်ထံကို အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း George W Bush က ဂုဏ်ပြုစာနှင့် အမှတ်တရလက်ဆောင် ပေးပို့
ဖမ်းဆီခံကျောင်းသားရုံးထုတ်စဉ် ရုတ်ရုတ်သဲသဲ ဖြစ် (ရုပ်သံ)
DKBA တပ်ဖွဲ့မှ ၀န်ကြီးချုပ်ယာဉ်တန်းအား သေနတ်ဖြင့် ချိန်ရွယ်တားဆီးမှုမှာ နားလည်မှုလွဲမှား၍ဟု ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဆို
တရုတ်ပြည်မှာ သက်ကြီးစောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာ မီးလောင်မှု ၃၈ ဦးသေ
အော်ရီဒူးမြန်မာ၏ ဖလန်း ဖလန်း အင်တာနက်အစီအစဉ်သစ်
ကျားကျောင်းထိုင်ဆရာတော် ကျားကုတ်ခံရတာမဟုတ်ဟု ဆရာဝန်ပြော
နိုင်ဂျာနိုင်ငံတွင် ဦးနှောက်ရောင် ရောဂါကြောင့် သေဆုံးသူဦးရေ ၄၄၃ ဦးအထိ မြင့်တက်
ကျောက်မီးသွေးသုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်ပေး စက်ရုံများ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် လုံးဝဖယ်ရှားရန် တရုတ်အစိုးရ ကတိပေး
ဖမ်းဆီးခံကျောင်းသားများနှင့် ၀န်းရံသူများကို ယနေ့တတိယအကြိမ် ရုံးထုတ်စစ်ဆေးမည်
တိုနေဒိုကြောင့် မက်ဆီကိုတွင် လူ ၁၃ ဦးသေဆုံး
" ဆ န္ဒ သုံး ခု "
အဘိုးကြီး တစ်ယောက် ငါးမျှားနေသည် ။ ရုတ်တရက် ငါးကြင်းကြီး တစ်ကောင်ကို မိသည် ။ အဘိုးကြီး ပျော်သွားသည် ။
ငါးက လူစကားဖြင့် အဘိုးကြီးကို မမျှော်လင့်ဘဲ ပြောသည် ။
" ကျမကို လွှတ်ပေးပါ အဘိုး..။ အဘိုးရဲ့ ဆန္ဒ သုံးခုကို ကျမ ဖြည့်ဆည်းပေးပါ့မယ်..."
Author: lubo601 | 8:45 PM | 1 Comment |
အလုပ်ခွင်မှာ ခံစားနေရတဲ့ စိတ်ဖိစီးမူတွေကို နှစ်၊ လ၊ ရက်တွေ ကြာအောင် သိမ်းဆည်းလို့ မထားလိုက်ပါနဲ့။ အလုပ်ဆိုတာ ပျော်ရွှင်မူတွေ ရှိကို ရှိရပါမယ်။ အမြဲ စိတ်ဖိစီးမူတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေပြီ ဆိုရင်တော့ တစ်ခုခု အမှားအယွင်း ဖြစ်လို့ နေပါပြီ။
ဝါသနာ မပါတဲ့ အလုပ်ကို ရွေးချယ်ပြီး လုပ်မိတဲ့ အတွက်ကြောင့် များလား...။
ငွေကို မက်ပြီး အလုပ်လုပ်တဲ့ အတွက်ကြောင့်လား...။
Thet Wai May 18, 2015 at 9:40pm
နံနက် ရှစ်နာရီပင် ဖြစ်သော်လည်း နွေဦးကာလ၏ နေက တော်တော်မြင့်နေပြီ။ တော်တော်လေးလည်း ပူနေပြီ။ နွေဦး၏ အငွေ့အသက်နှင့်အတူ ဥသြငှက်၏ တေးဆိုသံက လွမ်းမောချင်စရာ။ ငယ်ငယ်က ကျက်ခဲ့ဖူးသော နေရောင်ခြည်သည် ရောဂါပိုးများကို သေစေ၏ ဟူသော စကားကို ပြန်သတိရကာ လမ်းလျှောက်ထွက်ချင်စိတ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
အဖေါ်ဆိုတာ ဘယ်လိုဟာမျိုးကို ခေါ်မလဲ။ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ ဘာတွေ ခံစားနေရတယ်ဆိုတာကို သိတဲ့သူ၊ ကိုယ့်ကို ကိုယ်ချင်းစာနိုင်တဲ့သူ၊ ကိုယ့်ကိုနားလည်တဲ့သူ ( နားလည်တယ် ဆိုရာမှာလည်း ကိုယ့်ရဲ့ အကောင်းရော၊ အဆိုးရော၊ အားနည်းချက်တွေ အကုန်လုံးကို နားလည်တာကို ဆိုလိုတယ်။ ) ကိုယ့်ကို အလကားနေရင်း အပြစ်မတင်တဲ့သူ၊ မဝေဖန် မရှုံ့ချတဲ့သူ၊ အပြစ်မရှာတဲ့သူ ကို ကိုယ့်အဖေါ်လို့ ခေါ်တယ်။
နားလည်တယ် ဆိုတဲ့ကိစ္စဟာ ရာခိုင်နှုန်းပြည့် ဘယ်တော့မှ မဖြစ်နိုင်ဘူး။
အမေရိကန်ရဲများဟာ အမေရိကန်ပြည်သူလူထုကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါတယ်။ ပြည်သူ့အခွန်ငွေက ရဲများကို လခပေးပါတယ်။ ရဲများရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြည်နယ်အလိုက် ကွာခြားပါတယ်။ ဖက်ဒရယ်အစိုးရ ရုံးစိုက်ရာမြို့ (Federal District) ၀ါရှင်တန်ဒီစီက ရဲများကို ဖက်ဒရယ်အစိုးရက တိုက်ရိုက် စီမံခန့်ခွဲပါတယ်။
မြို့မဧည့်ခံတေး အမှတ် (၅) (၁၉၉၂) တေးစု တွင် ထူးအိမ်သင် ဝင်ရောက် သီဆိုပေးခဲ့သည့် နှစ်ပုဒ် အနက်မှ တပုဒ်။ အခြားတပုဒ်မှာ ကရဝိတ်(သ)မြူးဇစ် ဖြစ်သည်။ နားဆင်ရန် - http://youtu.be/mdkXH1AeGBs
ရှမ်းပြည်နယ် တီကျစ်မြို့ ပျက်စီးတော့မည်လော
မိုင်းတုံ(သံလွင်)ဆည်တည်ဆောက်ရေး စစ်တမ်းအဖွဲ့ ဒေသခံများအား မုန့်နှင့် လက်ဆောင် ပေး၍ ထောက်ခံရေးလက်မှတ်ထိုးခိုင်း
မြန်မာကယ်တင်ထားသည့် လှေစီးဒုက္ခသည်များ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံကဟု ကုလ အတည်ပြု
နတ်မောက်မြို့တွင် ညသန်းခေါင်ကျော်မီးလောင်၊ အဆောက်အဦတချို့ မီးလောင်ဆုံးရှုံး
လူမှောင်ခိုသမားတွေ ဖော်ထုတ်သွားမယ်လို့ မလေးရှား ၀န်ကြီးချုပ်ပြော
အိန္ဒိယနိုင်ငံ တောင်ပိုင်းရှိ ပြည်နယ်များတွင် အပူလှိုင်းဖြတ်ရာ အနည်းဆုံးလူ ၄၀၀ ခန့်သေဆုံး
ဆော်ဒီအာရေဗျ တိုက်လေယာဉ် တစ်စင်းကို ယီမင်တပ်များက ပစ်ချ
ရှမ်းမြောက်ပိုင်းက တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ဒေသခံတွေ စိုးရိမ်
တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်ခတ်ရပ်ရေး UWSA လက်မှတ်ထိုးမှာမဟုတ်
အသိမ်းခံမြေမှာ ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီ ထွန်ယက်လို့ ဒေသခံများ တားမြစ်
" ကံ ဆိုး တဲ့ အန် ကယ် "
" ဟယ်လို..ဂျွန်..၊ ဂွတ်မောနင်း..၊ ဒါနဲ့မင်းအန်ကယ် ဘာဖြစ်တာလဲကွ.."
" လက်ကျိုးသွားလို့ .."
" သူ စာကြည့်စားပွဲမှာ ထိုင်နေတုန်း သူ့ မိန်းမ ကျနော့် အန်တီက နောက်နားက တိတ်တိတ်လေးလာပြီး
အန်ကယ့်ရဲ့ နားကို ချစ်စနိုး ကိုက်လိုက်တယ်..အဲ့ဒါ လန့် ဖြန့် ပြီး သတိမေ့ သွားတယ်.."
တစ်ည .... ရီဝေဝေနဲ့ သူအိမ်ပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ တံခါးဖွင့်အိမ်ထဲဝင်ပြီး မီးဖွင့်ရင်း မိန်းမဖြစ်သူကို သူလှမ်းအော်တယ်။ ပြန်ထူးသံ မကြားရဘူး။ ခေါင်းငုံ့ဖိနပ်ချွတ်တော့ ဖိနပ်စင်ပေါ်တင်ထားတဲ့ စာရွက်တစ်ရွက်ကို သူတွေ့လိုက်တယ်။ ကောက်ယူကြည့်တော့ လင်မယားကွာရှင်းစာချုပ်ဖြစ်နေတယ်။ သူတစ်ချက် တွေဝေသွားတယ်။ သူမ တကယ်လုပ်လိမ့်မယ်လို့ သူထင်မထားခဲ့ဘူး။
နောင်တ (Contrition) ဟူသည် တနည်းအားဖြင့် မိမိရဲ့ အတိတ်က လုပ်ရပ်အမှားအပေါ် မချင့်မရဲဖြစ်ခြင်း (Suppressed) နဲ့ ယူကျုံးမရဖြစ်ခြင်း (Inconsolably) ပင်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူသားတိုင်းတွင် အမှားကင်းပြီး အသက်ရှင်မွေးဖွားကြီးပြင်းလာသူ ဟူ၍မရှိပေ။
မချင့်မရဲဖြစ်ခြင်း အမှား (Suppressed)
မိမိလုပ်ရပ်အမှားသည် မိမိတစ်ဦးတည်းသာ ထိခိုက်စေခြင်းမျိုးသည် ပြင်ဆင်ခွင့်လွှတ်နိုင်သော အမှားမျိုးဖြစ်သည်။ ဥပမာ မိမိပိုက်ဆံအိတ်ကျပျောက်၍ ငွေကြေးဆုံးရှုံးရခြင်းသည် မိမိတစ်ဦးတည်းသာ ထိခိုက်စေပြီးနောင်မဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်ခွင့်လွှတ်၍ရနိုင်သော အမှားဖြစ်သည်။ ဖြေဆည်၍ ရနိုင်သေးသည်။ အမှားငယ်ဖြစ်သည်။
သင့်မှာ ချစ်သူ ရှိပါသလား။ နောက်ပြီး ချစ်သူကိုရော မြတ်မြတ်နိုးနိုး နမ်းခဲ့ဖူး ပါသလား။
ပြီးတော့ ချစ်သူကို နမ်းခြင်းဟာ ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူ ပြုတယ်ဆိုတာ ကိုရော သိပါသလား။ ကဲ … စိတ်ဝင်စား တယ်ဆိုရင် အောက်မှာ ရေးထားတဲ့ အနမ်းနဲ့ ကျန်းမာရေး ဘယ်နည်း ဘယ်ပုံ ဆက်စပ်နေတယ် ဆိုတာကို ဆက်ပြီး ဖတ်ကြည့် ပေါ့နော်။
ဦးဟန်ကြည်တို့ ပါမိုင်းကိုရောက်ပြီး ဘာအလုပ်မှ မစနိုင်သေးတဲ့အချိန်၊ ရွာသူရွာသားတွေကလည်း မရမ်နယ်တစ်နယ်လုံးမှာ ကားလမ်းစပေါက်တဲ့ သူရို့ရွာရဲ့ ကားလမ်းဖွင့်ပွဲအတွက် အင်တိုက်အားတိုက် လုံးပမ်းနေကြချိန်၊ ယဉ်ကျေးမှုခြင်း ရေချိန်ညှိမရသေးတဲ့ အနှီသုံးလေးရက်အတွင်းမှာ လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံး ဘာလုပ်လို့ဘာကိုင်ရမှန်းမသိအောင် အတော်လေးကို ယောင်ချာ ချာဖြစ်ခဲ့ရပါရဲ့။
အောင်မြင်မှုချမ်းသာသုခ နှင့် ဓနဥစ္စာ.pdf
ပြောတတ် ဆိုတတ် ပေါင်းသင်းတတ်တဲ့သူ.pdf
ငြိမ်သက် ၁မိနစ် နှင့် အခြား.pdf
ကလေးမွှေးတတ်တိုင်း မိဘကောင်း မဟုတ်ပါဘူး၊
ပညာရှင်များ၏ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရ မိမိရင်သွေး ကလေးများ၏ ဘ၀တစ်ခုလုံးကို ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တဲ့ မိဘများစွာရှိပါတယ်။
အောက်ပါအချက် ( ရ ) ချက်အတိုင်း ပြုမူကျင့်ကြံခဲ့ကြမယ်ဆိုရင် ကလေးကိုဖျက်ဆီးရာရောက်ပါတယ်။